Usoro ọrụ - YTpals
Iwu ịkwụghachi & ndenye aha
ele anyị nkwụghachi iwu peeji maka nkọwa na nkwụghachi, yana ịkagbu ndenye aha gị.
Kedu ihe ọmụma anyị na-anakọta?
Anyị na-anata gị ozi mgbe ị denyere aha na akwụkwọ akụkọ anyị.
Mgbe ị na-agwa ma ọ bụ na-edebanye aha na saịtị anyị, dịka o kwesiri, enwere ike ịgwa gị ka ịbanye: adreesị ozi ịntanetị gị ma ọ bụ ozi kaadị akwụmụgwọ.
Gịnị ka anyị na-eji ozi gị maka?
Ọ bụla nke ozi anyị na-anakọta si i nwere ike ga-eji na otu n'ime ndị na-esonụ ụzọ:
- Iji hazie azụmahịa
Ozi gị, ma ọ bụ n'ihu ọha ma ọ bụ nkeonwe, agaghị ere, gbanwere, wefee, ma ọ bụ nye ụlọ ọrụ ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla, na-enweghị nkwenye gị, ma ọ bụghị maka nzube doro anya nke ịnye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ achọrọ.
- Ka izipu oge site na email
Enwere ike iji adreesị ozi-e ị nyere gị zitere gị ozi, zaghachi ajụjụ, na / ma ọ bụ arịrịọ ndị ọzọ ma ọ bụ ajụjụ ndị ọzọ.
Anyị na-etinye usoro nchekwa dị iche iche iji chebe nchekwa nke ozi onwe gị mgbe ị nyere iwu
Anyị na-enye ojiji nke ihe nkesa dị nche. A na-ebufe ihe ọmụma zuru oke / ozi ntanetị site na teknụzụ Secure Socket Layer (SSL) wee zoo n'ime nchekwa data anyị na-akwụ ụgwọ naanị ka ndị nwere ikikere ohere ịnweta ohere dị na ndị ahụ nwere ike ịnweta, ma achọrọ ka ịchekwa ozi ahụ.
Mgbe azụmahịa gasịrị, agaghị echekwa ozi onwe gị (kaadị akwụmụgwọ, nọmba nchekwa ọha, ego na ihe ndị ọzọ) na sava anyị.
Ọ bụ na anyị na-eji kuki?
Ee (Kuki bụ obere faịlụ nke saịtị ma ọ bụ onye na-enye ọrụ na-enyefe draịvụ kọmputa gị site na ihe nchọgharị weebụ gị (ọ bụrụ na ị kwere) nke na-enyere saịtị ma ọ bụ sistemụ ọrụ aka ịmata ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi
Anyị na-eji kuki enyere anyị aka icheta ma dezie ihe ndị dị na ụlọ ahịa gị, ghọta ma chekwaa mmasị gị maka nleta n'ọdịnihu ma chịkọta data nchịkọta gbasara okporo ụzọ saịtị yana saịtị mmekọrịta ka anyị nwee ike inye ezigbo ahụmịhe na ngwaọrụ n'ọdịnihu.
Niile ndị Ọkachamara na / ma ọ bụ itinye aka na / ma ọ bụ VIP zụtara ikike inweta nkwụghachi, machibidoro iwu. Nke a bụ n'ihi ịgaghị arụ ọrụ n'ịntanetị. Onye nrụpụta ụgwọ anyị bụ 100% echebere yana iwu, ọ nweghị ụgwọ ka enweghị ebubo na enweghị ndị ahịa nkwenye n'oge zụọ.
Anyị nwere ikike ịjụ ọrụ YTpals maka ndị ọrụ na-emebi sistemu ahụ
Ọ bụ na anyị igosipụta ozi ọ bụla na-abụghị ndị ọzọ?
Anyị na-adịghị ere, azụmahịa, ma ọ bụ n'ụzọ nyefee n'èzí ọzọ gị chọpụta mmadụ. Nke a adịghị agụnye tụkwasịrị obi nke atọ onye aka anyị ka anyị na-arụ ọrụ anyị website, na-eduzi anyị azụmahịa, ma ọ bụ arụ ọrụ gị, ka ogologo dị ka ndị ọzọ na-ekweta na-a ozi nzuzo. Anyị nwekwara ike hapụ gị ozi mgbe anyị kwere ntọhapụ bụ ihe kwesịrị ekwesị ime na iwu, manye anyị na saịtị atumatu, ma ọ bụ na-echebe anyị ma ọ bụ ndị ọzọ ikike, ihe onwunwe, ma ọ bụ nchekwa. Otú ọ dị, ndị na-abụghị idemesie amata esenowo ọzọ nwere ike ịdị ka ndị ọzọ n'ihi na ahịa, mgbasa ozi, ma ọ bụ ndị ọzọ.
Usoro iwu nke ọrụ ntanetị a na-emetụta naanị ozi anakọtara site na weebụsaịtị anyị ọ bụghị maka ozi anakọtara na ntanetị.
Site n'iji saịtị anyị, ị kwadoro Usoro ọrụ anyị n'ịntanetị.
Mgbanwe na Usoro Ọrụ Anyị
Ọ bụrụ na anyị kpebiri ịgbanwe Usoro ọrụ anyị, anyị ga-eziga mgbanwe ndị ahụ na ibe a.